कुनचाहिँ रोज्ने ? | Nirmala Mani Adhikary (Ayod Dhaumya)
« देवताहरु : कति वास्तविक कति काल्पनिक
The Sadharanikaran Model and Aristotle’s Model of Communication: A Comparative Study »
कुनचाहिँ रोज्ने ?
धर्म मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद आजको मात्र विवाद होइन । शदियौं अगाडी देखि नै यस संबन्धमा वाद विवाद प्रतिवाद चल्दै आइरहेको हो ।
नास्तिकहरु जे सुकै भनिरहेका होऊन् आस्तिकहरुचाहिँ सदा विश्वासी छन् कि फगत् ईश्वरीय तत्व मात्र सदा सुखदायी छ । परमात्मा मात्र जीवनमा पनि साथ हुनुहुन्छ र मृत्युमा पनि साथ हुनुहुन्छ । अरु कोही यस्ता छैनन् जोसँग एक पटक वियोग नहोस् । भौतिक सुख क्षणिक् हो भने आध्यात्मिक सुख चाहिँ अक्षय । धर्म वा रेलिजन वा मजहब जे भनेर होस् ईश्वरीय सत्ताप्रतिको आफ्नो आस्थालाई मान्छेले एउटा नाम दिएको छ । शुरुमा धर्म-तत्व साझा थियो अखण्डित थियो एउटै थियो र धर्म भनेपछि पुगिहाल्थ्यो । तर आज पुग्दैन । कुन धर्म यस्तो सवाल आउँछ र औद्योगिक ट्रेडमार्क जस्तै धार्मिक ट्रेडमार्क चाहिने स्थिति छ । हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म सिख धर्म बोन धर्म यहुदी धर्म इस्लाम धर्म इसाई कि्रश्चियन धर्म शिन्तो धर्म आदि-इत्यादि । यी त धार्मिक ट्रेडमार्क हुन् । यदि हामी ट्रेडमार्कको स्तरमा मात्र नअड्कने हो भने वास्तविक धर्म-तत्व एउटै हो उही नै हो । सृष्टिको उषाकालदेखि मानवले स्वतः आत्मसात् गरेको धर्मको उत्तराधिकार बोकेको धार्मिक ट्रेडमार्क चाहिँ अहिले आएर सनातन धर्म वा हिन्दू धर्म भएको छ । सनातन धर्मको पहिचानलाई सिध्याउन चाहनेहरुले यसका विरुद्ध कैयौं प्रहार गर्दै आएका छन् । पौराणिक कालमा हिरण्यकशिपु आदिले र ऐतिहासिक कालमा पनि अनेकौं आततायीहरुले यसलाई सिध्याउन सकेजति प्रयास गरेका थिए र अहिले पनि विविध कोणबाट सनातन धर्म माथि आक्रमण भइरहेका छन् । जे होस् तर यो धर्म समाप्त हुने छैन । यो त सृष्टिले स्वतः आत्मसात् गरेको शाश्वत तत्व हो । वास्तविक धर्म-तत्वको विजय कसैले रोक्न सक्दैन ।
हिन्दू दर्शन मुक्तिको बाटो देखाउँछ । हाम्रो लक्ष्य के त मुक्ति । तर अरु दर्शन उद्धारको मात्रै कुरा गर्छन् । चाहे बाइबल पढ्नोस् या कुरान पढ्नोस् त्यहाँ तपाईंका उद्धारका कुरा मात्र छन् । तपाईं पापमय हुनुहुन्छ अरे र त्यो पापबाट उद्धार भएपछि परमपिताले प्रमोदवन तथा अल्लाहले जन्नत दिनुहुन्छ । तर यता हिन्दू दर्शनको बाटोमा उद्धार त सामान्य कुरा हो प्राथमिक स्तरको – यहाँ त मुक्तिको कुरा छ । हिन्दू दर्शन उद्धारमा मात्र सीमित छैन यो त मानव मुक्तिको दर्शन हो । कुरा त कम्युनिष्टहरु पनि मुक्तिकै गर्छन् तर यो दर्शनबाट मानव-मुक्ति हुनेवाला छैन । यसबाट मुक्तिको आशा राख्नु व्यर्थ छ । मानव-मुक्तिका लागि सही दर्शन वेद उपनिषद् गीता आदिद्वारा दिग्दर्शित दर्शन नै हो । मैले पश्चिम होइन पूर्वतिर भनेर सही बाटो देखाउन नै चाहेको हूँ ।
जन्मेपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ । तर त्यो मृत्यु त्यतिबेला सार्थक हुन्छ – यदि हामी सार्थक जीवन बिताएर आएका छौं भने । जीवन सार्थक कसरी पार्ने त बडो महत्वको सवाल छ । जन्मनु भन्दा अघि म कहाँ थिएँ किन मेरो जन्म भयो मरेपछि म जाने कहाँ हो मेरो हेतु के हो यी सबै सवालका जवाफ हाम्रा महान् पुर्खाहरुले दिएका छन् । तत्वज्ञानले भरिएका छन् हाम्रा धर्मशास्त्र । तर समयको प्रवाहमा धेरै कुरा खण्डित भएका र कति कुरा मनखुशी थपिएका पनि छन् । हामीले धर्मशास्त्रबाट यथार्थ कुरा लिन सक्नु पर्दछ । यथार्थ कुरा चालेर लिनलाई ठूलै खुबी चाहिन्छ नि ! आपत् यहीँ त छ । आफूसँग खुबी भए राम्रै हुन्छ नत्र खुबी भएको को छ उही भएठाउँमा जानै पर् यो । तर जगत् छ नाटक घर । आफू हो कालनेमी तर अभिनय गरिरहेछ ऋषिको । दुष्टले सन्तको अभिनय गर्दैछ त कसरी पत्तो पाउने हेर्दा उस्तै छ हाउभाउ ठ्याक्क मिल्छ । भौंतारिँदा भौंतारिँदै के के हुने हो के के । परन्तु बाटो हुँदैनभएको कहाँ हो र बाटो चिन्नु र त्यसलाई अवलम्बन गर्नु त मानवको काम हो । हामीले आफूलाई सत्यपथमा लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । मैले पश्चिम होइन पूर्वतिर भनेर अँध्यारो होइन उज्यालोतिर भनेर सत्यपथ भनेर अनि भोगवाद होइन योगवाद भनेर मानव समाजका निमित्त सर्वोत्तम बाटो दिग्दर्शित गर्न चाहेको हूँ ।
पहिला त निश्चित गर्नु पर् यो कि हाम्रो लक्ष्य के हो लक्ष्य निर्धारणको तह देखि नै धेरै कुरा निर्धारित हुन्छन् । आध्यात्मिक मुक्तिलाई लक्ष्य जसले बनायो उसले जीवनको बाजी जित्यो । तर समस्याका लर्कन छन् । पेट भोको छ आङ नाङ्गो छ बस्ने थात-थलो छैन यो भए त्यो छैन अनि त्यो भए यो छैन । यता उता कता भनेर अल्मलिँदा-अल्मलिँदैमा भौंतारिँदैमा हुरुक्क प्राण जान्छ गइरहेकै छ । यो संसारमा जति पनि भौतिक सुख-सुविधाहरु छन् तिनीहरुलाई प्राप्त नगरुन्जेल ती साह्रै लोभलाग्दा हुन्छन् आकर्षक हुन्छन् । परन्तु उही चीज सधैंका लागि आफ्नै स्वामित्वमा रहेपछि तिन्मा उत्तिको आकर्षण रहँदैन । साह्रै रहरले किनेको लुगा थोत्रिएपछि फालिन्छ । तर ईश्वरीय प्रेम जति पुरानो भएतापनि अपि्रय हुँदैन बासी हुँदैन आकर्षणहीन हुँदैन र कदापि थोत्रिँदैन । यहीँनेर मलाई स्मरण भइरहेछ – योग हो परमात्मासँगको मिलन र भोग हो भौतिकताको खाल्डोमा पतन । हामीले भोगवाद त्यागेर योगवाद अवलम्बन गर्नु नै मानवका निमित्त सुहाउँदो कार्य हो ।
This entry was posted on December 4, 2008 at 8:06 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.